Mayelana NATHI - RISIN ENERGY CO., LIMITED
I-RISIN ENERGY CO., LIMITED yasungulwa ngonyaka we-2010 futhi itholakala eDongguan City. Ngemuva kweminyaka engaphezu kwe-10 yentuthuko eqhubekayo nokwenziwa okusha, i-RISIN ENERGY isibe ngumkhiqizi oholayo nothembekile wemikhiqizo yeSolar PV.
RISIN ENERGY abe namandla okunikela Intambo ye-Solar PV, Isixhumi se-Solar PV, Abahlanganisi Besijikelezi se-DC, Isilawuli Seshaja YeSolar, Isithali Samandla we-Anderson nezinye izinto ezahlukahlukene zesistimu ye-photovoltaic.
I-RISIN ENERGY iqondiswe kuzidingo zamakhasimende ezinamaqembu e-R & D aqinile, igxile ekunikezeni Izinga eliphakeme kakhulu nezinsizakalo ngokuthuthuka okuqhubekayo kwemikhiqizo yelanga, ukulawulwa okuqinile kokuphathwa kwekhwalithi kanye nensizakalo yamuva yokuthengisa.
IQINISO SQUARE METER
I-SALES REVENUE USD
Lapho ilanga seliphuma, usuku olusha luqala.
Amandla Amasha, Ukuphila okusha.
I-RISIN ENERGY ibe nokuhlangenwe nakho okungaphezu kweminyaka eyi-10+ ku-Solar PV Business and International Ukuhweba.
I-RISIN ENERGY's Solar PV Cable ithembele eqenjini eliqinile le-R & D, imigqa yokukhiqiza ephelele nezinsizakalo zokuhlola (Njenge Umshini wokudonsa we-Copper, Inqubo ye-Copper Wire Annealing & Tinned process, Cable Skein Twisting process, Sleeve Insulating Layer Machine, Cable Sheath Extruder, Umshini Wokuhambisa Cable, Umshini We-Rolling, I-Electron Irradiation, Umshini We-Rolling, Ukusika Okuzenzakalelayo / Ukuqaqa / Umshini Wokudonsa njll.), zonke izinqubo nemikhiqizo kumele ihlolwe ngumnyango we-QC ngaphambi kokuthumela.
AbakwaRISIN ENERGY's Solar Cable bavuze i-TUV 2PfG 1169 1000VDC kanye ne-TUV EN50618 H1Z2Z2-K 1500VDC Certification enama-25years iwaranti nempilo yokusebenza.
I-RISIN ENERGY's MC4 Solar Isixhumi inenqubo yokulawulwa kwesimanje nenqubo yokukhiqiza imishini yokuzenzakalelayo. Sine Umshini we-Die Casting Pin, Umshini we-Injection wePulasitiki, inqubo yokuBeka imihlangano ye-Assembly, i-Auto Assembly O indandatho ne-Connector machince izindlu, inqubo yokuhlola ukuphikiswa, i-Pull test machince, inqubo yokuhlola i-Waterproof, inqubo yokuhlola ukufakwa kahle kanye namaphakeji eplastiki ne-carton. njll. Zonke izinqubo nezixhumi ze-solar kumele zihlolwe yi-QC.
Isixhumi se-RISIN ENERGY's Solar DC Isixhumi sivumile i-1000V TUV EN50521: 2008 ne-1500V EN62852: Izitifiketi zika-2015 ezinewaranti eyi-25years nempilo yokusebenza.
SIFUNA UKUQHUMA ISELULEKO.
"Ikhebula lakho langa lihle kakhulu. Mnu. UMichael ungcono kakhulu. Sijabulela ukusebenza naye, sisiza kakhulu futhi sizolile. Ngifisa ukuthi ngokushesha ngicele i-solar cable 6mm futhi ngicela ngokuzayo singashintshi i-expression. Ithemba ukubona ukuxhumana okuningi ku ngokuzayo. "
"Lezi zixhumi ze-PV kanye nezixhumi ze-MC4 zafika ngokushesha futhi kwakulula kakhulu ukuzixhuma ekusethweni kwami ​​kwelanga. Ngizoqhubeka nokubheka iRisin Energy ngezidingo zami zesikhathi esizayo zeSolar."
- UNick P.
"Michael, njengoba njalo insizakalo yakho yamakhasimende ihamba kahle.
"Abaxhumi besifazane abaxhuma abesifazane be-MC4 kanye ne-Solar Cable bekuyithikithi nje lokudonsa umoya wami we-hybrid kanye nomphathi welanga ngokunika amandla i-cabin kulobu buso. Ngiyabonga ngayo yonke imikhiqizo enikezwa ilanga."
"Wenza lula ukufaka uhlelo lwelanga ku-RV. Ikhwalithi ilungile, Izixhumi ze-DC zinhle. Ngijabule kakhulu futhi ngangihlaba umxhwele.
- U-Eric V.
"Ngeke ngikwazi ukusho ngokwanele ngemikhiqizo yakho yelanga. Ngeke ngithembele omunye umuntu ngeSolar njalo. Ukulethwa ngokushesha futhi angalokothi kube nodaba oluvela kwi-MC4 eyodwa. Ngiyabonga ngokusebenza ngalesi sikhathi sokungabongi okukhulu kini kuzosebenza phakathi nalolu bhubhane. Ukukhanya kuhlale kuza ngemuva kwesivunguvungu. "
"Isistimu yami yonozungezilanga isethwe ngezintambo ze-R4in's's MC4 kanye ne-PV. Akunazikhalazo manje. Iyahambisana ngokuphelele nemaphaneli wami welanga.Imikhiqizo ye-Good kanye nensizakalo enhle kumakhasimende."